မြောက်ဦးမှ တွေ့ရတဲ့ဘုရားမှာ ရွှေဘုရားမဟုတ်ဟုဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြောက်ဦးမှ တွေ့ရတဲ့ဘုရားမှာ ရွှေဘုရားမဟုတ်ဟုဆို
Posted by လင်းဝေ on Jun 14, 2011 in Myanma News, News | 12 comments
သတင်းတွေထဲကပဲ တွေ့တာကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ရှေးဟောင်း သုတေသနရဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအရ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပညာရှင်တွေနဲ့ စစ်ဆေး အတည်မပြုခင် အထိ ရွှေဟု ယူဆရသော ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းပဲ သုံးပါတယ်။ သတ္တု အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုကိုလည်း သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနက ကျွမ်းကျင်သူများ၊ လက်ရာ အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုကို ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင်များက ပြုလုပ်ပြီး လိုအပ်ရင် ကာဘွန် ဓာတ်ခွဲနိုင်ဖို့ အတွက် ပြည်ပကို ပို့ဆောင် စစ်ဆေးရတယ်လို့ လေ့လာ သိရှိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု ဖြစ်စဉ်မှာတော့ ပြည်နယ် ၀န်ကြီးက ဆန္ဒစောပြီး လုပ်လိုက်တဲ့ အတွက် အုပ်အော် သောင်းနင်း ဖြစ်ပြီး ရှုတ်ထွေး ကုန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်ပ မီဒီယာများကတော့ ဒီကိစ္စကို ဘိုးတော်ဘုရား မဟာမြတ်မုနိဘုရားကို မန္တလေး ပင့်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ထင်ဟပ်ပြီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ အသွင် ဖြစ်အောင် စောင်းပေး ရေးသွား ခဲ့တာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အခု သတင်းမှားတဲ့ အခါကျတော့ ဘယ်သူမှ သတင်းပြင်ဆင်ချက် ထည့်တာ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
ဒီဖြစ်စဉ်လေးဟာ နိုင်ငံရေး သမားများ အနေနဲ့ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို နည်းလမ်းတကျ ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုတယ် ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာနဲ့ မီဒီယာတွေ အနေနဲ့လည်း သတင်း ဖော်ပြရာမှာ သတင်း အရင်းအမြစ် ခိုင်မာမှု၊ အကြောင်းအရာ ခိုင်မာမှုများ အတွက် စိစစ် ဖော်ပြဖို့လိုတယ်၊ မှားရင်လည်း အမှားပြင်သတင်း ဖော်ပြသင့်တယ် ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာကို ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အေးဗျာ… ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ဆိုတာ သူ့နေရာမှာဘဲ ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်ရင်
အကောင်းဆုံးပါ။မတတ်သာလို့ရွှေ့ပြောင်းမယ် ဆိုရင်တောင်မှ မူလအနေအထား
ရွှေ ရည်စိမ် လို့ ပြောတော့ အဲဒီခေတ်မှာ ရွှေရည်စိမ်တဲ့ အတတ်ပညာ ထွန်းကား
တော်သေးတာပေါ့.. အစစ်ကိုမ, သွားပြီး..အတုရွေရည်စိမ်ထားခဲ့တာပါ.. လုပ်မနေကြတာ…။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းတုန်းကလည်း စစ်တပ်ကပစ်လို့ လူလေးငါးယောက် ဒဏ်ရာရတာကို ရာ၊ထောင်ချီ သေတယ်၊ တည်ဆဲဥပဒေကျူးလွန်လို့ ထောင်ကျတာကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂ထောင်ကျော်ရှိတယ်၊ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်နဲ့အဖွဲ့ကို အရေးယူစဉ်အခါကလည်း အစိုးရကတောင် ဘာမှမပြောရသေးဘူး ဖြုတ်ထုတ်သတ်လုပ်နေပြီအော်တယ်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်တော့လည်း လူသိန်းချီသေတယ် ဝိုင်းအော်တယ်၊ ပြည်သူတွေ စေတနာနဲ့လုပ်အားပေးကြတာကိုလည်း အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးလို့ စွပ်စွဲတယ်၊ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲသတင်းကျတော့ မတရားဘူးပြောတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးပြန်တော့လည်း မဲလိမ်တယ်ဆိုတယ်၊ လွှတ်တော်ကျင်းပတဲ့အခါမှာလည်း ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိဘူးပြောတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လွှတ်တော့လည်း သတင်းထူးဆိုပြီး တစိတ်တအိတ်လုပ်တယ်၊ တေဒင်းဂျိုး မီဒီယာဒွေ….
ဒီမှာက မီဒီယာတွေ မှားခဲ့ရင် တရားစွဲခံရတာမျိုး မရှိသေးလို့ ဟု ထင်ပါသည် ။ တိုင်းသူပြည်သား တို့ ကို အလင်းပြ သည်နိုင်သည် မှာ မီဒီယာ ။ တိုင်းသူပြည်သား တို့ ကို အမှောင်ထဲ ဆွဲခေါ်နိုင်သည် မှာလည်း မီဒီယာ ။ ( အချို့ သော မီဒီယာ ) များသည် ဟုတ်သည်ရှိစေ မဟုတ်သည်ရှိစေ လတ်တလော မိမိစာစောင် hot ဖြစ်စေရေး သာ ရှေးရူပြီး ( အမှန်က မျက်ကန်းတစ္ဆေ မကြောက်တာ မမြင်ရလို့ ဆိုသလို ၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်တုံ့ ပြန်မှု များ ကို ရင်မဆိုင်ရသဖြင့် ) ရေးချင်သလို ရေးနေသည် ဟု မြင်မိပါကြောင်း ။ နိုင်ငံရေး နှင့် ပတ်သက်သည် က လွဲလျှင် ကျန်တာ လုပ်ချင်တာ လုပ်မည် ဟူသော သဘောမျိုးများ ခံယူထားနေကြပေသလော ဟူ ။ ကျွန်တော် ခံစားမိတာလေး ကို ပြောပြတာနော် ။ မှားတယ် ဆိုရင်လည်း ကြိုတင် တောင်းပန်ပါတယ် ဗျာ ။
၁၉၈၈ အရေးအခင်းတုန်းကလည်း စစ်တပ်ကပစ်လို့ လူလေးငါးယောက် ဒဏ်ရာရတာ မဟုတ်ပါဘူး မိုးထောင်ပစ် လို့ ယမ်းညှော် မိယုံလေးပါ။
“ပြည်ပ မီဒီယာများကတော့ ဒီကိစ္စကို ဘိုးတော်ဘုရား မဟာမြတ်မုနိဘုရားကို မန္တလေး ပင့်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ထင်ဟပ်ပြီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ အသွင် ဖြစ်အောင် စောင်းပေး ရေးသွား ခဲ့တာတွေ”
ဒါ့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်က အားနည်းချက်မရှိအောင် –
အုပ်ချုပ်သူတွေ သူတို့ကို လူယုံကြည်အောင်နေဘို့ လုပ်ဘို့ လိုပါတယ်။
ဘာလုပ်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲ တွက်ဆတတ်ဘို့ လိုပါတယ်။
သိက္ခာရှိတဲ့ တာဝန်ယူရဲတဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက သတင်းအပေါ် လက်ဦးဘို့လိုပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အစိုးရဌာနများက (ကိုယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ လိပ်ပြာလုံရင်) မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန် ပြည်သူကိုအသိပေးဘို့လိုပါတယ်။
မှန်ပါ့ဗျာ။ မီဒီယာတွေကပြောရင်တော့ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ယုံကြတာကိုး။ တစ်ခုခုမကျေမနပ်ဘူးဆိုရင် internet ကိုပြေးတင်မယ်။ ဟုတ်တာ မဟုတ်တာအပထား။ အဓိကက နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ဖို့နဲ့ ဆူပူအောင် သတင်းမှားတွေပေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတယ်။ သတင်းရေးတဲ့သူက မှန်တယ်၊ မမှန်ဘူးကို သေချာအောင် စုံစမ်း ပြီးမှရေးသင့်တယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
မီဒီယာကို လည်း အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။ ခု ကျွန်တော်တို့ တင်နေတဲ့ MG ကလည်း မီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီမှာ တင်နေတဲ့ ပို့စ်တွေထဲမှာလည်း သက်သေ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းတွေ ပါသလို၊ ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေ မရှိတဲ့ သတင်းတွေလည်း တင်နေကြပါတယ်။ အဲဒီလူတွေက သတင်းကို Hot ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်လို့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှပါ။ ကိုယ် သိတာကို သူများလည်း သိအောင်ဆိုပြီး မျှဝေတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်တာ ဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့။ ကိုယ် တင်တဲ့ ပို့စ်ကို ကိုယ် တာဝန်ယူရဲရမှာပါ။ ဒါမှ သတင်းသမား တစ်ယောက်ပီသမှာပေါ့။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရှေးအမွေဆိုတာ ထိမ်းနိုင်မှ – ဒီခေတ်ကြီးကလဲစိတ်ချရသေးဘူးဗျ–သတိထား ကိုယ့်
ထူးအိမ်သင်သီချင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ .. နည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ် .. လွဲလွဲလေးလဲကောင်းပါတယ် .. တဲ့ ….
ဒီအခြေအနေမှာ ဆိုရင်တော့ .. နည်းနည်းလေးမှ လွဲလို.မရဘူး .. ခင်ဗျားသီချင်းနဲ.မကိုက်ဘူး … ကိုထူးအိမ်သင်ရေ လို.ပဲပြောရမလားပဲ ..
ကျုပ်ဆိုရင်တော့ .. ပေးလိုက်မှာ .. ယူ .. အကုန်ယူကြ … ပြောမနေချင်ဘူး .. ပီးမှတခြားဘက်က ၀ိုက်ပီး တွယ်မှာ … ပီးရော
သူတို.မပေးချင်ကြတာက .. ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို ကိုယ့်ဒေသမှာပဲ ထိမ်းသိမ်းချင်လို.ပဲ ..
(ရှေးအဆက်ဆက်တုန်းကလဲ ဒါမျိုးတွေခံခဲ့ရတော့ .. မယုံကြတာ၊ မပေးချင်ကြတာ ပြောစရာလိုနေသေးလားဗျာ … )
သူတို.မို.လို. .. တတ်နိင်သလောက် ထိမ်းသ်ိ်မ်းဖို. ကြိုးစားရှာကြတာ ..